हाँस्यकलाकार सुन्तलीको आज जन्मदिन, धुर्मुसले दिए शुभकामना – KhabarTime
हाँस्यकलाकार सुन्तलीको आज जन्मदिन, धुर्मुसले दिए शुभकामना
काठमाडौँ – हास्यकलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता कुन्जना घिमिरे (सुन्तली) को आज जन्मदिन परेको छ । ललितपुरमा जन्मेकी सुन्तलीले आज आफ्नो जन्मदिन घरमै परिवारसँग मनाउदैछिन् । जन्मदिनको अवसरमा उनलाई बिहानैदेखी शुभकामनाको ओइरो लागेको छ ।
हास्य टेलिश्रृंखला ‘मेरी बास्सै’ मा ‘सुन्तली’ को रोल गरेपछि चर्चामा आएकी उनी ‘सुन्तली’ नाम बाट नै परिचित छिन् । आज जन्मदिनको अवसरमा उनका श्रीमान् तथा हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिएका छन् ।
उनले जन्मदिनको शुभकामना दिदै लेखेका छन् – प्रिय कुन्जना ! जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना !!
मेरो जीवनमा तिम्रो आगमनले सदैव खुसी ल्याएको छ । तिमी मेरो लागि माया, छहारी र आँट हौ । तिमीले मेरो जीवनमा इँटा हैन विश्वासको पर्खाल लगायौ । दु:ख छेक्ने छानो छायौ । ममताको चौतारी बनायौ र परिवारको जग बसायौ । तिम्रै मार्गदर्शनले हामीले लाखौँ आफन्त कमायौँ । तिम्रा जीवनका आगामी दिनहरू अझ सुखद् बनुन् । तिमीबाट प्राप्त प्रेमको यो नदी अनवरत बगिरहोस् । फेरि पनि शुभकामना !
परिवार सवार स्करपियो मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा दुर्घटना, आमा छोराको मृत्यु
पुरुषले ध्यान दिनै पर्ने महिलाहरुका यी १० कुराहरू जानी राखौं